Wowɔ W’ankasa Wo Bɔfo a Ɔbɔ Wo Ho Ban Anaa?
Bible no nkyerɛkyerɛ sɛ obiara wɔ n’ankasa bɔfo a ɔbɔ ne ho ban. Ɛyɛ nokware, bere bi Yesu kaa sɛ: “Monhwɛ na moammu nkumaa yi mu biako [Kristo asuafo] animtiaa; meka kyerɛ mo sɛ wɔn abɔfo a wɔwɔ soro no hu m’Agya a ɔwɔ soro no anim daa.” (Mateo 18:10) Ɛnyɛ nea na Yesu reka ne sɛ, onipa biara wɔ n’ankasa bɔfo a ɔbɔ ne ho ban. Mmom, nea na ɔreka ara ne sɛ, n’asuafo no mu biara ho hia abɔfo. Enti nokware Kristofo mfa wɔn nkwa nto asiane mu nnyɛ nneɛma a nyansa nnim nsusuw sɛ Onyankopɔn abɔfo bɛbɔ wɔn ho ban.
Wei kyerɛ sɛ abɔfo mmoa nnipa anaa? Ɛnyɛ saa na ɛte. (Dwom 91:11) Ebinom susuw sɛ Onyankopɔn nam abɔfo so kyerɛ wɔn kwan anaa wɔbɔ wɔn ho ban. Kenneth a yɛadi kan aka ne ho asɛm no wɔ saa adwene no. Yɛrentumi nka sɛ kyenkyen ara a, ɛnte saa. Ebia na ɛyɛ nokware. Sɛ Yehowa Adansefo reyɛ asɛnka adwuma no a, wɔtaa hu adanse a ɛkyerɛ sɛ abɔfo ka wɔn ho. Nanso esiane sɛ yentumi nhu abɔfo nti, yɛrentumi nkyerɛ sɛnea Onyankopɔn nam wɔn so boa ankorankoro. Ne nyinaa mu no, sɛ yɛda ade nyinaa so Tumfo no ase wɔ nea wayɛ ama yɛn biara ho a, ɛyɛ ne kwan so.—Kolosefo 3:15; Yakobo 1:17, 18.